Itoobiya oo in ka badan 5000 oo qof u xidhay rabshadaha | Berberanews.com
Home WARARKA Itoobiya oo in ka badan 5000 oo qof u xidhay rabshadaha
Itoobiya oo in ka badan 5000 oo qof u xidhay rabshadaha
Xogahayaha xafiiska ra’isal wasaaraha dalka Itoobiya Nigusuu Tilaahuun ayaa sheegay rabshadihi dhawaan dalka Itoobiya ka dhacay dadki loo qabqabtay iney gaareen 5,000 oo qof.
Mr Nigusuu oo shir jaraa’id uu kaga hadlayo xaaladda dalka Itoobiya qabtay wuxuu sheegay iney xaaladda dalka Itoobiya ay deggan tahay.
Dadkan faraha badan ee ay dowladda xirtay iyo dad kale oo ay weli dowladda ku raad joogta iney dalka ka geysteen dambiyo ay ka mid yihiin dilal iyo burburin hantiyeed.
Dhacadadaasi wixi ka dambeeyey “Qaab dhismeedka amniga ee dalka Itoobiya iney billaabeen iney qaadaan tallaabbooyin adag oo aan ka soo noqosha lahayn” ayuu yiri.
Hay’adaha amniga dalka Itoobiyana weli waxay ku raad joogaan dad badan oo rabshadahaasi lala xiriiriyey.
Mr Nigusuu wuxuu intaasi ku daray in la dhisay guddi isku dhaf ah oo heer qaran oo ka kooban heer federaal iyo heer deegaan iyada oo ay guddigu tagi doonaan dhammaan magaalooyinka iyo deegaannada ay dhibaatooyinka ka dhaceen.
“Guddigaasi heer qaran warbixinta ay ka soo diyaariyaan dhibaatooyinki rabshadahaasi ka dhashayna waxay la wadaagayaan shacabka dalka Itoobiya” ayuu yiri.
Mas’uuliyiinta dowladda la xiray
Mr Nigusuu wuxuu sheegay wixi ka dambeeyey dilki loo geystay fannaan Hachaalu Hundeesa waxaa xabsiga loo taxaabay mas’uuliyiin dowladeed oo heerar kala duwan.
“Mas’uuliyiinta dowladda intooda badan waxay dadaal xooggan ay u galeen sidi rabshadahaasi loo damin lahaa, halka ay jiraan mas’uuliyiin iyaguna rabshadahaasi qayb ka ahaa” ayuu yiri.
“Mas’uuliyiinta isku dayay lug iney dowladda kula jiraan lugna ay rabshadaha kula jiraan in sharciga lala tiigsanayo, qaar badan oo mas’uuliyiintaasi ka mid ahna ay dowladda hadda gacanta ku hayso”.
“Mas’uuliyiinta rabshadaha sii huriyey, iska indha tiray iyo ciidamada ammaanka ee ka gaabiyey iney waajibaadkooda sugidda amniga ay gutaan in dabagal lagu hayo oo ciddii xadgudub lagu helana tallaabba sharci ah laga qaadayo”.
Xarigga siyaasiyiinta iyo warieyaasha
“Wararka beenta ah ee warbaainta kala duwan laga baahiyo ee sababa iney dad badan naftooda ku waayaan ay dowladda wixi hadda ka dambeeya marnaba oggolaaneyn” ayuu yiri Nigusuu.
“Dalka ay ku nool yihiin iney qas iyo lab ka abuuraan warbaahinnada dadaalka ugu jira ma sheegan karaan iney yihiin warbaahin madax bannaan” ayuu yiri Nigusuu Tilaahuun .
Adeegga internetka la jaray
Rabshadihi ka dhashay dilki loo geystay fannaanki caanka ahaa Hachaaluu Hundesa waxay dowladdu jartay adeeggi interneetka. Haddaba BBC ayaa weydiisay xoghayaha xafiiska ra’isal wasaaraha Itoobiya Nigusuu Tilaahuun wuxuuna ku jawaabay:
“Interneetka waxaa loo jaray amniga dalka dartii, xaaladda amniga ee dalka markay gaarto heer la isku halleyn karo ayey dowladda sii deyneysaa adeegga interneetka”.
Mr Nigusuu wuxuu intaasi kudaray “Shacabku iney dowladda ka dalbanayaan shaqsiyaadka dhinaca facebook doonaya iney colaad qowmiyadeed ama diimeed ay abuuraan doonaya”, ayuu yiri.
Qayba ka mid ah magaalada Addis Ababa taladadi shalay ahayd waxaa loo sii daayey adeegga internetka” ayuu yiri xogahayaha xafiiska ra’isal wasaaraha Itoobiya Nigusuu Tilaahuun oo u warramay BBC.
Previous articleBerbera: Furitaanka kal-fadhiga 22aad ee Golaha Deegaanka
Next articleXarunta Dhaqanka Hargeysa Qabatay: Doodda Dedaallada Doorashooyinka